Nhau - Ungasarudza sei yakanaka inochinjika organic yekucheka zvinhu?
1. Ndezvipi zvinofanirwa kutarisirwa kana uchitenga zvinoshanduka zvekugadzira zvigadzirwa online? Nzira yekuita sei sarudzo chaiyo?
Iyo yekutenga pamhepo yeyakagadzika organic plugging zvinhu zvinoreva kuti icho chigadzirwa chinotengwa pane iyo indasitiri webhusaiti. Naizvozvo, pane zvimwe zvakakosha zvinoonekwa kana zvinhu zvinoda kutariswa. Zvakare, kana ichienderana nekutenga kwechigadzirwa, chakakosha uye chakakosha kutarisirwa, icho chinofanirwa kutariswa. Naizvozvo, zvinodikanwa kuti utarise zvinhu, senge mavambo echigadzirwa, kutaurwa uye mamodheru, saizi, paramita, mhando yechigadzirwa nemutengo, pamwe nemugadziri.
Kana iwe uchida kuva nesarudzo chaiyo, unofanirwa kuita zvinotevera zviviri: kutanga, unofanirwa kuita rimwe basa rekugadzirira usati watenga zvigadzirwa, kuti iwe ugone kuziva zvaunoziva; chechipiri, kana uchitenga zvigadzirwa, iwe unofanirwa kutora zvese zvinoenderana nekutarisa, uye unofanirwa kuve nekufungisisa kwakazara, kuti ugone kuve nemutongo wakarurama. Aya ari pamusoro mapoinzi anogona kuwanikwa.
2.Vagadziri vezvinhu zvinogadziriswa zvekugadzira zvekugadzira zvinoda kupihwa chitupa?
Vagadziri vezvinhu zvinogadziriswa zvekugadzira zvekugadzira zvinoda kuita rimwe basa rechitupa, nekuti basa iri rinogona kuunza mabhenefiti, sekuvandudza kukwikwidza kwevagadziri nezvigadzirwa zvavo mumusika, nekuvandudza zvakanakira hupfumi hwevagadziri. Naizvozvo, zvakafanira kutora basa iri zvakanyanya. Uye zvakare, kune maviri mativi anobatanidzwa mune yemhando manejimendi.
3. Ndezvipi zvakatarwa uye zvakakosha zvinodiwa kuti zvipinze organic organic plugging zvinhu?
Flexible organic plugging zvinhu, ine zvimwe zvakatarwa uye zvakakosha muzvigadzirwa, ndeiyi: yakaderera simba kushandiswa kwemidziyo, akasiyana mamodheru uye maratidziro, yakaderera system system, huwandu hwakawanda hwezvinhu zvekugadziriswa. Panyaya yekushandisa modhi, inogona kuvhiyiwa ichienderera kana zvakapindirana, uye mutengo wekushanda wakaderera uye kuvhiya kuri nyore uye kuri nyore. Mukushandisa, rudzi urwu rwekucheka zvinhu zvinogona kushandiswa muminda mizhinji. Kune avo vanogadzira, mhando yechigadzirwa inogona kuvimbiswa uye chigadzirwa chinogona kugadziridzwa sezvinodiwa.